Axmed Madoobe oo bahdilay Mareexan Iyo Raxanweyn « AYAAMO TV
Axmed Madoobe oo bahdilay Mareexan Iyo Raxanweyn
943 Views Date March 9th, 2014 time 11:17 pm
Axmed Madoobe Hogoomiyaha Maamulka Kmg Jubba ayaa ku hadaaqay hadal aay aad ugu caroodeen xubnaha maamulka jubba ugu jira Beelaha kale Soomaaliyeed.
Hogoomiyaha Maamulka jubba Axmed Madoobe oo ka hadlayay Xaflad aay maamulkiisa iskuugu yimadeen dhawaan Magaalada Kismaayo ayaa yiri Madoobe Nuunoow inta uusan isoo sharaxin marka hore waxaa loo baahna in reerahiisa xeryaha ka saaro.
Waxaan u sheegaya Madoobe Nuunow iyo nacabyada la midka ah in aay Kismaayo ka xuroowday asagooda ayuu yiri Axmed Madoobe asaga oo intaasi raaciyay in Kismaayo Taangi lagu xoreeyay uusan halkaasi ku imaan rabitaan shacab.
Hadalka axmed Madoobe ayaa waxaa durba ka carooday Fartaag iyo rag kale oo is moodayay in xaniinyo ku leeyahiin maamulka Jubba.
Hadalka Axmed Madoobe ayaa u muuqday mid uu ku jees jeesayay xubo ka tirsan maamulka Jubba kuwaa oo u dhashay beelaha Raxanweyn Iyo Mareexan.
SOOMAALIDA WAXAAY TIRAAHDA WAYSHA BIREEY DIBI HA QUUSTE hadaba maamulka axmed madoobe ayaa u muuqda mid uu ku qiranayo in aan kismaayo laga jecleen oo uu ku joogo waxaa ugu yeeray taaangi oo ula jeeeday ciidamada Kenya